Ulwazi lwe-RAM kunye neROM yoluhlu lweRedmi Qaphela 8 luye lwavela | I-Androidsis
Kukho ulindelo oluphezulu olujikeleze izixhobo ezilandelayo ezivela kwinkampani eyayisakuba lelinye lawona manqaku aphambili kaXiaomi. Ngokucacileyo sibhekisa kuRedmi, umenzi owaziwayo ofanele udumo kwigorha laseTshayina elikhankanyiweyo. Kwelinye icala, sibhekisa kwii-mobiles ze I-Redmi Qaphela i-8 uthotho, Eya kwenziwa yimodeli esemgangathweni kunye nokwahluka okungaphezulu kweevitamin koku, kwaye oko izakukhutshwa nge-29 ka-Agasti elandelayo.
Kwiiyure nje ezimbalwa ezidlulileyo besithetha ngalo ikhamera ephambili eya kuba neRedmi Qaphela 8 kunye neRedmi Qaphela 8 Pro. Oku kuyakuba yi-64 MP, kwaye njengoko i-Samsung inguye kuphela onesivamvo sesisombululo se-smartphones -esiyenze yasebenza ngoMeyi walo nyaka-, kuyacaca ukuba entsha ISOCELL Bright GW1 Iya kuba yilensi ekhokelela kwicandelo lokufota kuzo zombini iiterminal zezibonelelo eziphakathi. Kodwa eyona nto sigxile kuyo ngoku yile I-RAM kunye neROM ezahlukeneyo eziza kubonelelwa ngazo kwintengisokunye nokukhethwa kombala, kwaye ngoku singena kulombulelo kulwazi olutsha oluvelileyo.
Ngokwendlela portal eyaziwayo I-Smart Price Uthumele kwiiyure nje ezimbalwa ezidlulileyo ngokusekwe ngumthombo ovuzayo, el Redmi Qaphela 8 izakufika kwintengiso yaseTshayina ngeendlela ezintathu: esona siseko siza kuba yi-4 GB ye-RAM ene-64 GB yokugcina; phakathi, i-6 GB ye-RAM ene-64 GB yokugcina; kwaye yakutshanje kunye neyona iphambili, i-6 GB ye-RAM ene-128 GB yokugcina. Zonke ezi zinto ziya kukhutshwa ngokhetho lwemibala emithathu: iMeteorite emnyama (emnyama), iBlue Fantasy (luhlaza okwesibhakabhaka) kunye noMhlophe (mhlophe).
Inqaku leRedmi 8 livuza
Ukuthetha nge I-Redmi Qaphela i-8 Pro, iyakwenziwa ngokusemthethweni e-China kwiinguqulelo ze-6 GB ye-RAM ene-64 GB yokugcina kunye ne-6 GB ye-RAM ene-128 GB yokugcina, kodwa, ukuyinika ukuchukumisa okuqhubela phambili, iya kuba nokuhluka kwe-8 GB ye-RAM ene-128 GB yokugcina kwabo basebenzisi bacela kwaye bafuna ngaphezulu. Umbala wayo owahlukileyo yi-Hail Green (luhlaza), Fritillaria White (mhlophe) kunye ne-Electro-optical Ash (emnyama).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ulwazi lwe-RAM kunye ne-ROM yoluhlu lweRedmi Qaphela 8 luye lwakhanya
Iifoto zikaGoogle ziyakwazi ukubona umxholo weefoto kwaye zisivumele ukuba sizikope kwezinye iinkqubo
Ifowuni yeHuawei eneHarmonyOS ayizukufika kulo nyaka